Ady amin’ny tazomoka: Hiasa ho an’ny fiovana eny anivon’ny fiaraha-monina ny Mpianatra
jeudi, 13 février 2020 20:05
Tontosa tao Mahavelona Foulpointe, androany, ny lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy "ny fizarana ny lay misy odimoka maharitra mitohy eny anivon'ny fiarahamonina". Nanolotra lay misy odimoka maharitra miisa iray tapitrisa avy amin’ny fanjakana amerikana, amin'ny alàlan'ny Presidential Malaria Initiative (PMI) izay an’ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny fampandrosoana manerantany (USAID), izay mamatsy vola ny lay sy ny hetsika fizarana, mitentina 3,88 tapitrisa dolara.
Tamin'ny taona 2018 dia lay miisa 13 tapitrisa no nozarain’ny USAID sy Global Fund manerana an'i Madagasikara. Ireto lay 1 tapitrisa ireto izany dia hasolo ireo efa simba ary hiantoka ihany koa ny fiarovana an’ireo tokantrano vaovao.
Ny fandrindrana ny hetsika fizarana lay misy odimoka maharitra dia iandraiketan’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka, amin’ny alalan’ny Tetikasa Nasionaly Iadiana amin’ny Tazomoka (PNLP), sy ny tetikasa IMPACT an’ny USAID/PMI, izay miasa any amin'ny faritra 13 eto Madagasikara ary miantoka ny ahazoan’ny vahoaka malagasy fanafody sy vokatra ara-pahasalamana tsara kalitao.
Ahitana ny fiaraha-miombona antoky ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny Fampianarana ara-Teknika sy arak’Asa koa ity hetsika fizarana lay misy odimoka ity.
"Mpianatra kilasy taona fahefatra (T4) miisa 70 000 no hiasa ho an’ny fiovana eny anivon’ny fiaraha-monina," hoy Tale Jeneralin’ny USAID John Dunlop. “Naseho azy ireo ny maha zavadehibe ny lay misy odimoka maharitra sy ny fampiasana azy araka ny tokony ho izy. Noho izany fahalalana ananany izany dia ho lasa mpampianatra izy ireo : hampianatra ny fianakaviany sy ny mpianatra hafa ny antony ilàna ny lay misy odimoka.” Hanampy ihany koa izy ireo eo amin’ny fitsinjarana ny lay satria izy no mahalala ny tokantrano tsy mbola manana lay na efa simba ny lay ao aminy.